တရုတ် Hexagon စွပ်စွပ်တောက်တဲ့စက်ရုံနှင့်ပေးသွင်း | Changlan
၁။ အဓိကအားဖြင့်ကွန်ကရစ်နှင့်သိပ်သည်းသောသဘာဝကျောက်များ၊ သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံ၊ လက်ရန်းများ၊ ဓာတ်လှေကားလိုင်းများ၊ စက်များ၊ သံကွင်းများ၊ တံခါးများ၊ လှေကားများ၊ အပြင်ဘက်နံရံအချောများ၊ ပြတင်းပေါက်များစသည်တို့ကို medium load fixing ၏အခန်းကဏ္အတွက်သင့်တော်သည်။
Hexagon casing gecko: ကြမ်းပြင်ချဲ့ခြင်းကိုအဓိကအားဖြင့်ကွန်ကရစ်နှင့်သိပ်သည်းသောသဘာဝကျောက်များ၊ သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံ၊ သံလမ်းများ၊ ဓာတ်လှေကားလိုင်းများ၊ စက်များ၊ ကွင်းများ၊ တံခါးများ၊ လှေကားများ၊ အပြင်ဘက်နံရံကြွေပြားများ၊ ပြတင်းပေါက်များ၊ မရ။ ဤထုတ်ကုန်သည်ရိုးရှင်းသောတပ်ဆင်မှု၏အားသာချက်များ၊ အဆင်ပြေမြန်ဆန်ခြင်း၊ ဂဟေဆော်ခြင်း၊ ထည့်ထားသောမူလီများနှင့်အခြားခက်ခဲသောလုပ်ငန်းစဉ်များကိုအစားထိုးရန်ထုတ်ကုန်အသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
၂။ ကုန်ပစ္စည်းကိုနံရံပြွန်၊ hex bolt၊ အစင်းခွံနှင့်ပြားချပ်ချပ်တို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ မူလီ၏ချည်ကြိုးသည်အပြည့်အ ၀ ချည်ထားသည်။
နာမည် Hexagon casing တောက်တဲ့
စံ DIN၊ GB
1. Hexagon ပြွန်များကိုတည်ဆောက်ပုံအစိတ်အပိုင်းများ၊ ကိရိယာများနှင့်စက်အစိတ်အပိုင်းများတွင်တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုကြသည်။ ပတ် ၀ န်းကျင်ပြွန်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ၊ သံမဏိအထူးပုံသဏ္tubeာန်ပြွန်တွင်ယေဘူယျအားဖြင့် inertia နှင့် section modulus ၏ပိုကြီးသောအခိုက်အတန့်ရှိသည်၊ ပိုကြီးတဲ့ကွေးညွှတ်မှုနှင့်ဆွဲအားခုခံနိုင်စွမ်းရှိတယ်၊ သံမဏိကယ်တင်တော်မူ၏။
2. Hexagon casing gecko သည်နံရံ၊ ကြမ်းပြင်နှင့်ကော်လံပေါ်ရှိပိုက်အထောက်အပံ့/ဆိုင်းငံ့/bracket သို့မဟုတ်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုပြုပြင်ရန်အသုံးပြုသောအထူး threaded connector တစ်ခုဖြစ်သည်။ Hexagonal casing geckos များကိုပိုက်များကာကွယ်ရန်သို့မဟုတ်ပိုက်တပ်ဆင်ရန်ကွင်းများချောမွေ့စေရန်မြေအောက်ခန်းများကိုအများအားဖြင့်သုံးသည်
ပစ္စည်း: Q235 မျက်နှာပြင်ကုသမှု: အရောင်တင်